उत्तराधिकार व्यवस्था र आफ्नो अधिकार - सबै वकिल दुनिया मा! कानूनी क्याफे वकिल संग अनलाइन.
उत्तराधिकार व्यवस्था र आफ्नो अधिकार
उत्तराधिकार व्यवस्था संचालन को अधिकार को एक गरेको बचे सम्पत्ति हकदार छ । को प्रकार मा निर्भर गर्दछ सम्पत्तिको व्यवस्था आफ्नो राज्य छ, एक जीवित पति गर्न सक्षम हुन सक्छ दाबी, एक उत्तराधिकार भए तापनि, के तपाईं हुन सक्छ मा लेखिएको आफ्नो हुनेछ । यो वैधानिक अधिकार को एक जीवित पति टिका कि मा एक राज्य निम्नानुसार समुदाय सम्पत्ति वा साधारण व्यवस्था दृष्टिकोण गर्न उत्तराधिकार छ । छोराछोरी, र कहिलेकाहीं नातिनातिनी, पनि एक सही दाबी गर्न एक उत्तराधिकार जब एक आमा वा मर्छ
कि एक राज्य निम्नानुसार समुदाय सम्पत्ति नियमहरू वा साधारण व्यवस्था निर्धारण कसरी उत्तराधिकार व्यवस्था असर गर्छ वितरण को एक विवाहित गरेको सम्पत्ति छ । निम्न छन् सामुदायिक सम्पत्ति अमेरिका: एरिजोना, क्यालिफोर्निया, आइडाहो, नेवादा, नयाँ मेक्सिको, टेक्सास, वासिङ्टन, विस्कन्सिन, र अलास्का (हुनत अलास्का मा, त्यहाँ हुनुपर्छ एक लिखित सम्झौता बीच जीवनसाथी).
बाँकी अमेरिका पालन साधारण व्यवस्था छ । सामुदायिक सम्पत्ति साधारण सम्पत्ति प्राप्त गरेर या त पति समयमा विवाह । आय प्राप्त काम, सम्पत्ति किनेको समयमा विवाह संग आय देखि रोजगार, र अलग छ कि सम्पत्ति एक जोडीलाई दिन्छ समुदाय छ । एक पति कायम छुट्टै चासो सम्पत्ति माध्यम प्राप्त गर्न निम्न तरिका: एक समुदाय मा राज्य सम्पत्ति, प्रत्येक जोडीलाई मालिक एक-आधा चासो को वैवाहिक सम्पत्ति छ । जीवनसाथी सही छ को गर्न आफ्नो शेयर समुदाय को सम्पत्ति मा जे तरिका चाहना छ । एक मृत, उदाहरणका लागि, गर्न सक्छन् चुन्नु दिन आफ्नो वा उनको आधा समुदाय को सम्पत्ति भन्दा अन्य कसैले गर्न बाँकी. एक प्रावधान मा एक सम्झौता पनि परिवर्तन एक जोडीलाई सही वितरण गर्न सम्पत्ति छ । एक पति भएको एकमात्र को अधिकार आफ्नो छुट्टै सम्पत्ति छ । एक मृत पति वितरण गर्न दुवै आफ्नो छुट्टै सम्पत्ति र आफ्नो शेयर समुदाय को सम्पत्ति मा एक हुनेछ । विपरीत बाँकी पति वा पत्नीको मा एक समुदाय सम्पत्ति राज्य, एक पति छैन हकदार एक-आधा चासो मा सबै सम्पत्ति प्राप्त समयमा विवाह । एक साधारण व्यवस्था राज्य, दुवै छैन जरूरी आफ्नै सम्पत्ति प्राप्त समयमा विवाह । स्वामित्व निर्धारित नाम मा शीर्षक वा जो साथी' आय खरिद सम्पत्ति भने एक शीर्षक अप्रासंगिक छ. भने, उदाहरणका लागि, मात्र एक जोडीलाई लिन्छ शीर्षक गर्न, एक सम्पत्ति, पति वा पत्नीको नाम संग मा काम मालिक घर पनि भने अन्य जोडीलाई वास्तवमा यो लागि भुक्तानी. एक जीवित पति वा पत्नीको मा एक साधारण व्यवस्था राज्य देखि संरक्षण पूरा, तथापि हरेक साधारण राज्य व्यवस्था छ, फरक निर्देशन, तर सबै भन्दा साधारण व्यवस्था अमेरिका' सम्पत्तिको व्यवस्था गर्न अनुमति दिन्छ बाँकी पति दाबी गर्न एक-तेस्रो को मृत पति सम्पत्ति छ । एक मृत पति छनौट गर्न सक्नुहुन्छ बिदा कम भन्दा एक राज्य गरेको सम्पत्तिको सही, तर बाँकी जोडीलाई बनाउन सक्छ दाबी गर्न अदालत संग हकदार राशि । यो इच्छा अनुसार बाहिर गरेको शुभकामना भने बाँकी पति सहमत लेखन मा भन्दा कम स्वीकार्न वैधानिक राशि वा बाँकी जोडीलाई कहिल्यै जान्छ अदालत दाबी गर्न कानूनी शेयर । एक पटक एक छोडपत्र हुन्छ अन्तिम, धेरै अमेरिका स्वतः रद्द उपहार मा बनाएको हुनेछ गर्न पूर्व-पति. अन्य राज्यहरु मा, एक छोडपत्र कुनै प्रभाव छ मा उपहार को पूर्व-पति यो सबै भन्दा राम्रो नयाँ बनाउन हुनेछ पछि छोडपत्र हुन्छ अन्तिम रोक्न एक अन्जानमा उपहार एक पूर्व पति. विपरीत एक पति, एक बच्चा सामान्यतया कुनै कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्न सही हकदार एक मृत आमाबाबुले गरेको सम्पत्ति छ । व्यवस्था गर्छ छोराछोरीको सुरक्षा गर्दा एक अन्जानमा मा एक इच्छा हुन्छ, तर । व्यवस्था यस्तो चूक छन् आकस्मिक विशेष गरी जब, जन्म बच्चा पछि देखापर्यो को सृष्टिको हुनेछ । निर्भर कि एक जोडीलाई रहँदैन, मेटिएका बच्चा सक्छ हकदार केही भाग को मृत को आमाबाबुले गरेको सम्पत्ति छ । भने जानिजानि थियो, यद्यपि, यो हुनेछ राज्य यो । सामान्य मा, पोते छैन एक कानूनी सही हकदार गर्न सम्पत्ति देखि एक. केही राज्यहरु मा, भने अभिभावक मरेको छ, तर, हुन सक्छ वैधानिक सही हकदार गर्न सम्पत्ति देखि एक भने हुनेछ समावेश गर्दैन एक एक्सप्रेस कथन को उद्देश्य को. अझै पनि भ्रमित बारेमा हक अधिकार वा एक विशिष्ट मुद्दा छैन भनेर सम्बोधन गरेको मा यो लेख, यो उपयोगी हुन सक्छ, बोल्न संग एक सम्पत्ति योजना अधिवक्ता क्रम मा सही निर्णय गर्न छ । तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् सुरु गरेर आज भेट्टाउने एक स्थानीय सम्पत्ति योजना अधिवक्ता प्रतिनिधित्व हुनेछ जो आफ्नो गतिविधिलाई । सम्पर्क एक योग्य सम्पत्ति योजना वकील मदत गर्न तपाईं सुनिश्चित कि आफ्नो प्रेम व्यक्तिहरूलाई छन्, देखभाल, र तपाईंको इच्छा सम्मानित छन्.
निःशुल्क कानुनी सल्लाह दुर्घटना